Inotungamira Kuvhenekesa Chigadziro & Pendant Mwenje Mugadziri | Huayi Taa
Professional yakatungamira kujekesa mhinduro
Chiedza chine hutano hwehupenyu huri nani
Yakatangwa muna 1986, iri kuGuzen guta muGhensh Guta, "Capital Capital" yeChina.
Nyanzvi mu r&D, kugadzirwa uye kutengesa zvigadzirwa zvekuvhenekera uye zvimwe zvigadzirwa zvine chekuita
LED LAM LATY LAP
Penguin Modeling Dhizaini.
LED red rambi
Matatu-Bhatani Kubata Panel
Dhizaina Fashoni Dhizaini
Avant-garde modeling dhizaini
Huai live river
An the Britation Hukuru Brand Kubva muna 1986, Huari mwenje wakavhurika kuti utungamire indasitiri yemwenje muzvikamu zvakasiyana zvezvipfunzi. Kunyangwe yakazara yakazara huwandu hwenzvimbo dzakanaka& Kunze kwezvigadzirwa zvemwenje, kana kuti 7-nyeredzi International Landroroom Showroom, kana pamusoro pe200000sQM Center, titevere, tichakupa rwendo rwakanaka rwekuziva nezve Huari. Vhiki rokugara rwizi ruchabatwa muAlibaba International uye mimwe medias medias yekuratidzira Huaari Showroom& fekitori kuongorora uye vatsva vanosvika pakutengesa, kushongedza& zvigadzirwa zvemwenje,Maindasitiri Pendant Light, maindasitiri maindasitiri mwenje, chiedza chemazuva ano mwenje, girazi kumiswa mwenje,yakagadzirirwa mwenje, hunhu hwakavimbika uye hwakavimbika.
Gamuchira kutarisisa kwako. Zvakawanda zvinoshamisa zvakamirira iwe ...
Alibaba / Facebook / Klumia / YouTube: Huailights
Kempinski Hotel Dubai inobatanidza mall yeEmiras, makamuri ehotera ane akashongedzwa akashongedzwa ane marble yekugezera, hombe skrini LCD TV nenzvimbo yekudyira. Mamwe makamuri anogona kutarisa Dubai Ski Village.
Le Méridien Hotel inofumura travller yekuziva uye yekugadzira kune yakasarudzika uye inosangana nezvinoitika kwaunofanira kuenda. Yakadzika mune yegoridhe zera rekufamba, Le Méridien inoramba iri nzvimbo inoungana vanhu kuti vafarire kuwanikwa kwenzvimbo dzepasirese. Iwo akanakisa emhando yepamusoro emunyika aine mibayiro iri nani.
India-Phoenix Musika Guta
High Street Phoenix, yaimbozivikanwa sePhoenix Mills, ndiyo imwe yenzvimbo dzekutengesa dzakakura muIndia, iri muLower Parel, Mumbai. Iyo yepasi pasi nzvimbo yacho zviuru mazana matatu nemazana matatu ezviuru. Pamusoro peiyo mall, iyo compond inogadzira hotera ine nyeredzi shanu, multiplex, commercoal nzvimbo uye shongwe yekugara.
Hilton Astana, iyo state-of-the-art hotera iri mune ramangwana EXPO-2017 yekuratidzira yakaoma. Nakidzwa nehupamhi hwebasa apo iwe uripano pamwe nezvinhu zvinofungidzirwa senzvimbo yekuchengetera spa, padenga rebar, nzvimbo yekusimbisa muviri, dziva remukati, Executive Lounge nenzvimbo dzakakura dzemusangano Iri mukati memunites yeguta repakati, mahofisi emakambani, Hurumende yeKazakhstan madhipatimendi nemasangano, uye Astana International Airport.
Ungade here kutibata nesu
Ingotiudza zvaunoda, tinogona kuita zvinopfuura zvaunogona kufungidzira